1. Vanhu vazhinji vakashandiswa kushandisa Windows makomputa kwenguva yakareba uye vanoona kuti Mac yacho yakaoma kushandisa, tisingazive kuti kiyi dzinopisa ndedzei, ivo havana kujairana, ivo havasi nani, muchokwadi, iyo Mac iri yakagadzikana inoshanda sisitimu. Iyo ine inozivikanwa pasi rese sisitimu yekuchengetedza iyo iri nyore kushandisa kupfuura iwe zvaunofunga. Nhasi tichazivisa maitiro ekutora skrini dzeMac OS, idzo dzakawanda uye dziri nyore nzira.
2. Yakazara skrini inotorwa nekudzvanya paShift + Command + 3 makiyi panguva imwe chete.
3. Kana kurira kwekukwikwidza kwanzwika Iyo yakatorwa skrini ichachengetedzwa paDesktop uye inogona kushandiswa sezviri kudikanwa.
4. Chinyorwa chirimwa kubatwa nekutsikirira Shift + Command + 4 makiyi panguva imwe chete.
5. Iwe uchaona "+" chiratidzo chakakomberedza iyo cursor yegonzo. Bata kuruboshwe tinya uye dhonza munzvimbo yaunoda kupfura. Wobva wasunungura mbeva. Mifananidzo yawatora ichachengetwa paDesktop.
6. Muenzaniso wemufananidzo wakanyorwa nechisarudzo chirimwa.
7. Screen yekutora uye yekuvhara vhidhiyo kurekodha nekutsikirira paShift + Command + 5 makiyi panguva imwe chete.
8. Sisitimu yacho inoratidza yekutora menyu kusarudza sezvakaratidzwa mumufananidzo.
9. Iko mashandiro emenyu yega yega anobva kuruboshwe kuenda kurudyi: ● Tora skrini rese ● Bata chete hwindo rinoshanda ● Chinyorwa chekutora chirimwa ● Rekodha vhidhiyo rese re Screen ● Rodha vhidhiyo inosarudza vhidhiyo. Chinyorwa ● Zvimwe zvekushandisa sarudzo ● Bhatani bhatani - Tora kana Rekodhi - tanga kurekodha vhidhiyo. Kana vhidhiyo yekurekodha yatanga, unogona kumira kurekodha chero nguva nekudzvanya pakanzi "◻" pakakwirira kurudyi kwemenyu bar. Paunodzvanya Mira, vhidhiyo yako ichachengetedzwa otomatiki paDesktop.
10. Uye heano mashoma matipi anobatsira ekumhanyisa zvinhu kumusoro apo yako Mac inotora iyo skrini. Chiratidziro chidiki cheiyo faira refaira chinoratidzwa mukona yezasi yekurudyi. Iwe unogona kushandisa mbeva kudzvanya uye kubatisisa pamufano wekutarisa uye kuidhonza uye kuikanda muchirongwa cheLINE kana google maodoksi kuendesa mberi kana kutangazve basa nekukasira.
11. Kubva pamuenzaniso uri pamusoro, zvinogona kuoneka kuti vanogadzira Mac OS vakaita seApple vanoteerera kune zvidiki zvidiki mune ravo basa. Kunyangwe kutora skrini ine dzakasiyana siyana mabasa kusarudza kubva. Inochengetedza yakawanda nguva yekuchekesa mafoto kana mavhidhiyo. Inogona kuendesa mafaera akaendeswa kana kushandiswa ipapo ipapo. Kune zvakare matipi anobatsira ekushandisa Mac OS kubatsira kuita kuti basa rako rive nyore uye nekukurumidza. Dzvanya kuti utevere webhusaiti yedu kuti ugamuchire dzinonakidza nhau uye zvinyorwa zvatichange tichiisa mune inotevera chiitiko.